Bit By Bit - imifuniselo Running - 4.6 Advice
Enoba wenza ngokwakho okanye ukusebenza kunye neqabane, ndingathanda ukuba anikele amabini ngamacebiso ukuba ndiye ndafumana luncedo ngokukodwa kumsebenzi yam. Okokuqala, cinga kangangoko kunokwenzeka phambi kokuba nayiphi na idata sele iqokelelwe. Eli cebiso mhlawumbi kubonakala izicacele ukuba abaphandi baqhele imifuniselo isebenza, kodwa kubaluleke kakhulu ukuba abaphandi oqhele ukusebenza imithombo yedatha enkulu (jonga iSahluko 2). Kunye imithombo yedatha enkulu uninzi umsebenzi kwenzeka emva kokuba i data, kodwa imifuniselo azizichasi; uninzi lo msebenzi kufuneka lwenzeke phambi kokuba ukuqokelela idata. Enye yeendlela eziphambili ukunyanzela ngokwakho ukuba bacinge ngenyameko malunga uyilo lwakho nohlalutyo kukudala uze ubhalise isicwangciso uhlalutyo eksperimenti yakho. Ngethamsanqa, uninzi ngeyona-zokusebenza uhlalutyo lweenkcukacha zovavanyo ziye ngokusesikweni izikhokelo ingxelo, kwaye ezi zikhokelo ayindawo kakhulu ukuqala xa usenza isicwangciso sakho Uhlalutyo (Schulz et al. 2010; Gerber et al. 2014; Simmons, Nelson, and Simonsohn 2011) .
Iceba yesibini icebiso kukuba akukho ukucikideka bani uza ungafezeka, yaye ngenxa yoko, umele uzame bayile uthotho experimenti ukuba ukugxininisa omnye komnye. Ndiye Ndikuvile oku uchazwa sicwangciso armada; kunokuba sizame ukwakha enye inqanawa enkulu, ukuze nibe amaqashiso zokwakha olungcono iinqanawa ezincinane kunye amandla ezisebenzisanayo. Ezi ndidi wezifundo multi-zovavanyo zezi rhoqo bengqondo, kodwa kunqabile kwenye. Ngethamsanqa, ixabiso eliphantsi ezinye experimenti yedijithali kwenza ezi hlobo multi-eksperimenti ifunde lula.
Kwakhona, ndingathanda ukuba anikele amabini ngamacebiso ezingafuni eqhelekileyo ngoku kodwa ibalulekile ingakumbi ayile imifuniselo ubudala yedijithali: ukudala data zero iindleko eziseludinini ukwakha yokuziphatha kuyilo yakho.